Posted on December 19, 2014 by Aung Thu Htet	အခုဆိုရင် Thaing Wizard မှာ update မလုပ်ဖြစ်တာ ကိုးလလောက်ရှိပါပြီ။ ဒီကနေ့တော့ update လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အသစ်တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဆရာပွင့်လန်း(သတ္တုတွင်း)ရဲ့ “မောင်လေးဆိုတဲ့ ပြောင်းပြန်မုန်တိုင်း” စာအုပ်ပါ။ ယခုစာအုပ်ကို သိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာ ကိုလူမင်း မှ ebook ပြုလုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
This entry was posted in Bando, Banshay, Martial Arts, Martial Arts Book, Pwe Kyaung, Thaing Byaung Byan and tagged စာအုပ်, ဆရာချယ်, ပွင့်လန်း(သတ္တုတွင်း), ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, မှတ်တမ်း, သိုင်းပြောင်းပြန် by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...